१० लाख लगानी गर्ने बैंकलाई १००० केजी लोकल जीरा मसिनो चामल उपहार दिन चाहन्छु । | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home कृषि १० लाख लगानी गर्ने बैंकलाई १००० केजी लोकल जीरा मसिनो चामल उपहार दिन चाहन्छु ।
In: कृषि, बिचार
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपाललाई व्श्विकै धनी राष्ट्र बनाउन अर्गानिक कृषिबाट सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै अवशर र सम्भाबनाहरु छन् । तर युवाहरु विदेश पलाएन भईरहेका छन् । बडो विडम्बना हो । नेपाल सरकारले अब, कृषि नीति बनाउदा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुगी अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र कृषि नीति बनाउनु पर्छ । कृषि उत्पादन निर्यात जन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । नेपालमै बसेर कृषि व्यवसाय गर्न खोजेको युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । कृषि उत्पादन आयातको तुलनामा निर्यात भन्दा दश गुणा कम छ । प्रतिवेदनहरुमा उत्पादन बढेको देखिए पनि वार्षिक ३६ अर्बको आयात भईरहेको छ । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । बेरोजगार युवाहरुको लागि रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । अर्गानिक एग्रो टुरिजमको अवधारणालाई व्यापक बनाएर बेरोजगारी युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न ध्यान दिनु पर्छ । अर्गानिक एग्रो टुरिजमलाई जोडेर रोजगारी सृजना गर्न सके मात्र बेरोजगारी युवाहरु विदेशिने क्रम रोक्न सकिन्छ । अहिले सम्म युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सकेको छैन ।
मैले नुवाकोट जिल्ला देवराली गा.वि.स. वडा नं. –१ पोलोचेतमा आफ्नै ४० रोपनी जग्गामा अर्गानिक खेती गरिरहेको छु । तर गाडी जाने बाटो पुगेको छैन । पुर्खाले नै कृषि पेशा अंङ्गालेकोले मैले पनि कृषि पेशालाई निरन्तरता दिईरहेको छु । कृषि पहिले पुृर्खाले गरे जस्तै होइन । कृषिमा आधुनिककरण गर्न र व्यवसायीकरण गर्न लागि परेको छु । आफ्नो उत्पादन अनि नेपालकै अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई स्वदेशमात्र नभएर अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने सोचका साथ अर्गानिक भिगन एग्रिकल्चर कम्पनिको स्थापना गरी संचालन गर्दै आएको छु । अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि प्रशोधन प्याकेजिङ गर्न पैसा नपुगेको हुनाले विभिन्न बैंकहरुमा धाएं र कुरा गरें तर सबै बैंकहरु मेरो कम्पनिमा १० लाख लगानी गर्न डराएं । गाडी जाने बाटो नभएकोले र दुर्गम क्षेत्र भएकोले नै डराएको होला । मेरो मात्र यस्तो समस्या होइन , अरु कृर्षकहरुको पनि समस्या हो । बैंकले लगानी नगरे पनि हिक्मत हारेको छैन । अभैm हिक्मतका साथ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छु । कृषि पेशामा नै सन्तुष्टि छु । मेरो कम्पनिलाई अगाडि बढाउनलाई लगानी धेरै चाहिएको छैन । १० लाख मात्र भए पुग्छ । अर्गानिक भिगन एग्रिकल्चर कम्पनिमा लगानी गर्ने बैंकलाई १००० केजी लोकल जिरा मसिनो चामल उपहार दिन चाहन्छु । हुनत कृषि विलगेट्सको कम्प्युटर सफ्टवयर जस्तो होइन । तर पनि मानविय हार्डवयर माथि शासन गर्ने सफ्टवयर कृषि नै हो । कृषि विकासको विस्तार र व्यवसायिक विकास गर्नका लागि दुर्गम क्षेत्रको जग्गा पनि काठमाडौंको जग्गा जतिको मुल्याङ्कन गरिनु पर्छ । अनि मात्र कृषि विकास र व्यवसायिक करणमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । नत्र भने अवको २० वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ । नेपाललाई विश्वको धनी राष्ट्र बनाउन सकिदैन । अहिले सम्मको नीति हेर्दा नयाँ व्यवसाय जन्माउने सोच बनाएको छैन । धनीलाई झन् धनी र गरीबलाई झन् गरीब बनाउने नीति बनाएको छ । विनोद चौधरीलाई जति पनि लगानी गर्ने नीति बनाएको छ । तर नयाँ हजारौ विनोद
चौधरी जस्तो जन्माउन चाहदैन । यो बडो विडम्वनाको कुरा हो । जवसम्म दुर्गम क्षेत्रको जग्गा काठमाडौको जग्गा जस्तै मुल्याङ्कन हुँदैन । हजारौ विनोद चौधरी जस्तो जन्माउन चाहदैनन् । सम्पर्ण नेपालीहरुलाई धनी बनाउन चाहदैनन् । तव सम्म नेपाललाई विश्वकै धनी राष्ट्र बनाउन सकिदैन । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, तथा नेपाल राष्ट्रबैंकले बनाएका नीति अनुशार जोसँग सहरमा जग्गा छ । घर छ , सुन छ वा अपुत रुपमा सम्पत्ति छ भने मात्र व्यवसायी गर्न पाउछन् । नत्रभने जत्ति नै शिप, जाँगर, कला , ज्ञान अनि दुर्गम क्षेत्रमा सयौ रोपनि जग्गा भएपनि विदेश जान बाध्य छन् । शैक्षिक प्रमाण–पत्र, ज्ञान, शिप, कला ,जाँगर साथै दुर्गम क्षेत्रमा भएको जग्गाको कुनै मुल्याङ्कन छैन । शैक्षिक प्रमाण–पत्र धितोमा लगानी गर्ने र दुर्गम क्षेत्रको जग्गा धितोमा लगानी गर्ने भन्ने भाषण त सुनेको छु तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । यो बडो विडम्बनाको कुरो हो ।
( प्रवन्धक निर्देशक )
अर्गानिक भिगन एग्रिकल्चर प्रा.लि.